Taariikh nololeedka Fanaanda Xalima Iimaan Nuur (Xalima Fatoosh)
Xaliimo Fatoosh waxya ku dhalatay Maglada Jig jiga sanadku marku ahaa 1953 gii waxabarashadeedii iyo waaya aragnimadeedii dhalainyaraba waxya ku soo qadatay magladaeeda Jig jiga iyo nawaaxigeeda. Xalima waxay ahayd qof waxay maskaxada geliso ku dhaqaaqda kana war keenata waxay markii danbe ku dhaqaaqday in ay noqoto fananada waxayna timid magalada Hargaysa oo markaa fanku ka bilaabmaya taas oo ay nasiib ku heshay in ay fanka gasho ayana ku soo dhaweeyeeyn abawandii markaa fanka bilabay ee uu ka miad ahaa Ahamed Saleebaan bide iyo Maxamed aadan dacar, xiliga ay fanka soo gashay Xaliimo waxa ku jiray Gabdho yar oo fananain ah wax tuma kabanka heesan kuma jirin markaas lakiin Xaliima waxay noqotay gabadhii ugu horaysya ee kabanka tunta qaadan heesta 1967 kii.
Xaliima waxay wado haowsheedii fankaba oo ay ku soo dhawataba waxay u wareegtay xagii Riwayadaha oo ay Riwayadii ugu horaysya soo saratay 1969 kii Raiwayadii la oran jiray.
waxaa ku xigtay
Howl iyo Cajayl
Fatoosh iyo faataa
waxaa riwayadahaa lahaa abwaano kala duwan oo ay ka mid ahayeen.
Fananaita Badan kooda naanaysahoodu waa naanayso cajaaiba ah mar waxay ka yimaadan awoowayaashood sida Bide, Huryo,Magool, mooge , haldahaa, intaan waa tusale waxaan ugu soo qatay tusale ahaan Xaliimo.
Xaliimo Naanaysteeda waxaa la yirahdaa Fatoosh waana magaca riwaydahay dhigtay mid ka mid ah waan riayadii ay ku soo caan baxday oo lagu aqoonsaday in ay tahay fananad aan la gaadhi karayan sidaa darteed waxaa loo bixiyey Fatoosh oo ah magacii lagu jilaayey raiwayda. tan kale riwaydan markay dhigaysay waxay u qadeen hargaysa oo u markaa ka haa raysal warae maxamed ibaraahin cigal alla h u naxariistee markaas buu iyaoda iyo fananatii riwaydada wadayba uu casumay lacagna siiyey lacagtii uu siiyey qaybtii ka soo gaadhay bay ku iibsatay kaban kabankaas bay ku baratay sida loo tumo kabanka musiga.
xiliim hada waxay joogtaa muqdhisho iyadoo il la gacana ka jaban waxay xaliima degan tahay guryihii fanaanta Ex fiyoora maxayeelay waxay ka mid ahayd kooxdii waaberi.